SLNTV oo xalay si toos ah u tabiyay munaasibaddii 26-ka June iyo Agaasime Dhuxul Oo ka hadlay | Somaliland.Org
Agaasimaha Telefishanka qaranka Mr. Axmed Saleebaan Dhuxul, ayaa tallaabaddan ku tilmaamay mid guul ah oo qeyb ka ah qorshahooda la xidhiidha horumarinta iyo taabo-gelinta TV-ga qaranka.
“Telefishanka qaranku xalay muddo dhawr saacadood ah ayuu si toos ah u soo tabinayay munaasibaddii 26-ka June lagu xusayay ee madaxtooyadda. Inkasta oo ay TV-yo kale oo si toos ah u tabinayay ay iyaguna jireen haddana sida uu TV-ga qaranku Live-ka u sii ahaa umay ahayn. Waxaan Leeyahay ILAAHAY arrintaasi wuu nagu guuleeyay xalay,”ayuu yidhi Agaasimaha Telefishanka qaranku.
Mr. Dhuxul waxa uu u mahad celiyay Wasiirka warfaafinta oo uu tilmaamay inuu mudadii yarayd ee uu xafiiska joogay ka xaliyay dhibaatooyin sanado haystay TV-ga, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Waxaan u mahad naq iyo ammaan halkan uga soo jeedinayaa Masuuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo uu ugu Horeeyo Wasiirka Md. Cabdi Yuusuf Ducaale Boobe oo runtii xaliyay dhibaatooyin sanado badan haystay TV-ga SLNTV. Waxaanna ka mid ah inaanu helo qalabkan lagu gudbiyo baahinta Live-ka ah oo ku kacay lacag aad u badan oo illaa afartan kun oo Dollar ah ayuu markii uu xilka qabtayba noo suurto-geliyay inuu noo soo iibiyo.”
“Waxa kale oo aan u mahad naqayaa agaasimihii guud ee hore Faysal Cali, waxa nasiib wanaag aan soo dhawaynayaa agaasimaha cusub C/Rashiid Jibriil oo isagu ku soo beegmay xili uu horumar iyo awood muujiyay TV-ga Qaranku,”ayuu yidhi Agaasimaha Telefishanka qaranku.
Mr. Dhuxul waxa uu si weyn ugu mahad celiyay shaqaalaha iyo hawl-wadeenaddii xalay ka hawl-galay baahintii munaasibadaas qaran ee lagu qabtay madaxtooyadda ee bulshadda ku dhaqan goboladda iyo dalka dibadiisaba u soo gudbinayay munaasibadaasi.
“shacbiga Somaliland meel ay joogaanba waxaan leeyahay Hambalyo munaasibadda 26-ka June awgeed. Munaasibaddan oo ah 52 guuraddii ka soo wareegtay maalintii u horeysay ee calan Soomaali leedahay la qaato. Inkasta calankaasi sidii ay ku bixinay ee midowgii Soomaaliya dhibaatooyin faro-badani inaga soo mareen. Haddana waxa ILAAHAY inagu guuleeyay inaynu dawladnimadeenii gacanteena ku jirto oo masiirkeena iyo dadnimadeenaba aynu haysano,”ayuu yidhi Axmed Saleebaan Dhuxul oo u waramayay Shabakadda wararka ee Somaliland.Org.
Waxa kale oo uu tilmaamay inay caawana toos u baahin doonaan xaflad dhaqan iyo caways ah oo laga dhigayo Huteelka Crown, taasi oo ay soo qaban qaabiyeen Axmed Xasan Cawke iyo C/Salaan Ibraahim Hereri.
Previous PostRugta Ganacsiga Oo Xukuumadda Ku Taageertay Wada Hadaladii ay la yeelatay SOomaaliyaNext PostAgaasimaha Guud ee wasaaradda arrimaha dibadda oo xilkii la wareegay	Blog